Ukuzimisela komtshato kwabaNtsana akukho nantoni na iindleko
NgoNovemba 16, 1995, e-Addison, e-Illinois, uJacqueline Williams, 28, isoka lakhe, uFefell Caffey, 22, kunye nomzala wakhe, uLaverne Ward, 24, wangena kwikhaya le-Intombi, owayeneminyaka engama-28 ubudala, uDebra Evans.
UDebra Evans wayengunina wabantwana abathathu: USamantha oneminyaka engu-10 ubudala, uYoshuwa oneminyaka engama-8 ubudala, kunye neJannes eneminyaka engama-19 ubudala, owayekholelwa ukuba yindodana kaWard. Wayesineenyanga ezithoba ezithwele umntwana wakhe wesine kwaye wayefanelekile ukuya esibhedlele ngoNovemba 19, ukuba asebenze.
Wayeceba ukwenza igama lomntwana uEliya.
U-Evans wayenomyalelo wokumisela ukulwa noWadi kwintlondi yasekhaya kodwa wavumela iqela lingene ekhaya lakhe. Ngaphakathi ngaphakathi, iWadi yazama ukwenza u-Evans amkele i-$ 2,000 ukuze atshintshele umntwana wakhe. Xa wayengafuni, uCaffey wakhupha isibhamu waza wamdubula. Emva koko iWadi kunye neCafyy yazingela intombi kaEvans uSamantha yaza yambulala.
Emva koko, njengoEvans bezama ukuphilisa ubomi bakhe, uWilliams, uCaffey, kunye neWadi basebenzisa izikhenkce kunye neqayi ukuze bamnqume kwaye bawasuse umntwana ongakazalwa esesisu sakhe.
UWilliams wenza ukuvuselela ngomlomo emntwaneni kwaye emva kokuphefumula kwakhe, wamhlamba ekhitshini yinkomfa waza wambathisa umntu olele.
Ukushiya iJordan kwindlu kunye nomama wakhe ofile noodadewabo, abathathu bathatha inyana uEliya kunye noYoshuwa unyana kaEvans waza waya kwindlu yomhlobo, uPatrice Scott, malunga nobusuku bobusuku. UWilliams wabuza uScott ukuba uya kugcina uYoshuwa ubusuku, echaza ukuba unina udutshulwe kwaye wayesesibhedlele.
Kwakhona watshela uScott ukuba wayebelethile kwangokuhlwa kwaye wayeza kuzisa umntwana kusenjenjalo ukuze ambone.
UYoshuwa ucele Uncedo
UJoshua, owayesethukile waza wakhala ngeli busuku, waya eScott ngentsasa elandelayo ukuze ancede. Wamxelela ukuba unina nodadewabo babeswelekile kwaye bathiwa ngabo baxanduva.
Emva kokuba iqela liqaphele ukuba lingabungqina kwizenzo zabo zobugebengu abazibekayo ukuze bambulale. Wayetyhefu, waqhawulwa waza uWilliam wamgxotha ngelixa uCafey ephosa entanyeni yakhe, ekugqibeleni wambulala . Umzimba wakhe omncinane wasala e-dolophu edolophini elisondeleyo.
UJacqueline Williams kunye noFedell Caffey
Ukubulawa kukaDebra Evans kunye nokweba umntwana ongakazalwa kwakuyicebo kwisithuba sexesha elithile. UWilliams, unina wabantwana abathathu, wayengenakukwazi ukuba nabantwana, kodwa uCaffey wayefuna ukuba nguyise kwaye wayechukumisa uWilliam malunga nokuba nomntwana, ngokukodwa umntu onesikhumba esikhanyayo ukuze abonakale ngokufanayo.
UWilliams waqala ukukhohlisa ukukhulelwa ngo-Apreli ka-1999, etshela abahlobo bakhe kwisitya sokusana umntwana ukuba umntwana wayefanele ngo-Agasti. Emva koko wanyusa umhla ofunekayo ngo-Oktobha nangomhla kaNovemba 1, wachaza igosa lakhe lokulinganisa ukuba wayebelethe umntwana osana.
Kodwa uWilliams wayengasenayo umntwana kwaye ngokutsho kwakhe, iWadi yamnika isisombululo. Intombi yakhe yangaphambili, uEvans wayeza kubeletha umntwana omtsha.
Ngoku kunye nosana olutsha kwi-tow, uWilliams wacinga ukuba iingxaki zakhe ziphelile. Iqabane lakhe lavuyiswa kuba nguyise kwaye wayenomntwana ukuba abonise igosa lakhe lovavanyo kunye nabahlobo kunye nosapho.
I-Laverne Ward, ekholelwa ukuba ikhokelelwa nguWilliam kunye neCafyy ku-Evans, nayo yeso sizathu sokuba abo bathathu baboshwe ngenxa yokubulala.
Kubikwa ukuba, iWadi ibiza intombi endala emva kokubulala u-Evans kwaye yamxelela ukuba aphelise ulwalamano lwakhe kunye nesoka lakhe okanye ubuso bakhe benento efanayo kuye kwenzelwa uEvans.
Uphando lwamapolisa luye lwaholela kwiWard emva kweJordan, owamapolisa ukuba wayeyindodana kaWadi, kwaye yedwa umntwana oshiywe endlwini engenakonakaliswa.
Abo bathathu baboshwa baza batholwa. UWilliam noKaffey bafumana isigwebo sokufa kwaye iWadi yafumana isigwebo sempilo kunye neminyaka engama-60. Ngomhla kaJanuwari 11, 2003, iGrand ye-Illinois, uGeorge Homer uRyan, uSr. URyan wabuya wagwetyelwa inkohlakalo kwaye wachitha iminyaka emihlanu entolongweni.
U-Eliya wasinda ekungeneni kwakhe kobuhlungu kwihlabathi elingenakonakala kwaye ngo-Oktobha 1996, uyise kaEvans, uSamuel Evans, wanikelwa u-Eliya nomzalwana wakhe iJordan umgcini wezomthetho.
Uchungechunge lomsebenzi weeMetali: Ukuqikelela ukubuyiswa komsebenzi
Iingoma ezi-10 malunga neDinosaurs